डा.केसीका माग लत्याउँदै सरकार « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
डा.केसीका माग लत्याउँदै सरकार
२६ श्रावण २०७४, बिहीबार ०६:३६ मा प्रकाशित
उपत्यकामै ५ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने गरी कानुन बन्दै
केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गम्भिर
काठमाण्डौ, साउन २६ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै ११ औं पटक आमरण अनशनरत डा.गोविन्द केसीका मागलाई लत्याउँदै संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले आधा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ ।समितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने डा. केसीको मागको ठीकविपरीत कानुन बनाउन लागेको हो ।
सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेको संशोधन टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले यस्तो व्यवस्था राखेर विधेयकलाई समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्दैछ । कार्यदलले बिहीबार बिहान अन्तिम रूप दिएर दिउँसो पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । डा.केसीका मागविपरीत विधेयकको दफा १३ मा ‘आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने’ प्रावधान थपिएको छ । चार उपदफा रहेको उक्त दफामा एउटा उपदफा थपेर पूर्वाधार पूरा भए सबैलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो ।
काठमाडौंको मनमोहन, प्रहरी, पिपुल्स, नेसनल, ललितपुरको अस्विन र झापाको बीएन्डसीले पूर्वाधार पूरा गरेका छन् । अस्विनबाहेक ५ वटालाई मेडिकल काउन्सिलले समेत सम्बन्धन दिन सहमति दिइसकेको छ । अस्विनले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । चारवटाले त्रिविबाट सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बीएन्डसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा फाइल अघि बढाएको छ । केयूले अहिले भएकै १० भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।‘पूर्वाधार पूरा गरिसकेका संस्थाले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘भोलि पूर्ण बैठकमा पेस गर्छौं ।’ बुधबार साँझ बसेको कार्यदलको बैठकमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइराला, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि सहभागी थिए ।
माथेमा र डा। कोइरालाले डा। केसीको माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पोखरेलले ६ वटाले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छलफलको विषय बिहीबार १० बजेसम्म बाहिर नल्याउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको ती सदस्यले बताए । विधेयकको दफा १३ को उपदफा ४ मा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नसकिने केही कारण राखेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेमा, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेमा र विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा कलेज भएमा सम्बन्धन दिन नसकिने प्रावधानमध्ये कार्यदलले ‘विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा रहेमा’ भन्ने बुँदा हटाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका माग राख्दै १८ दिनदेखि अनशनरत प्रा।डा। गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै जटिल भएको भन्दै चिकित्सकहरूले कुनै पनि बेला ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘हालको स्थिति विचार गर्दा उनको ज्यान जोखिममा पर्ने शारीरिक जटिलता देखिन सक्छ,’ प्रा।डा। दिव्या सिंह शाहले भनिन्, ‘कुनै पनि समय उनलाई आकस्मिक मेडिकल रिससिटैसन ९मृतस्प्रायलाई जीवित गर्ने प्रक्रिया० आवश्यक पर्न सक्छ ।’ हाल उनलाई चौबीसै घण्टा अक्सिजन दिइएको छ । डा। केसीमा बोल्न गाह्रो हुने, रिंगटा लाग्ने र शिथिल हुने लक्षण देखिएका छन् । बस्दा र पल्टँदासमेत रिंगटा लाग्छ भने मांसपेशी बाउँडिने र छाती दुख्ने समस्या पहिलेको भन्दा बढेको छ । उनको शरीर अति कमजोर रहेकाले सम्भावित संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै भेटघाट गर्न आउनेलाई नजिकै जान दिइएको छैन ।
यसैबीच, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले डा। केसीका मागको समर्थनमा सरकारलाई दबाब दिन बुधबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका छन् । नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसनका सचिव डा। अमितकुमार यादवका अनुसार सरकारले अब पनि डा। केसीका माग पूरा नगरे थप कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याइने छन् । मुलुकभरका सरकारी चिकित्सकले डा। केसीको समर्थनमा बुधबार कालोपट्टी लगाएर काम गरे ।
सरकारी चिकित्सक संघ गोडानको आह्वानमा चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएको गोडान प्रवक्ता डा. सुजितकुमार झाले बताए । बिहीबारसम्म ठोस निर्णय नभए थप कडा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।